ट्रस्ट होली स्पिरिट, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
के तपाईं पवित्र आत्मालाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ?
हाम्रा एक जना एल्डरले भर्खरै मलाई बताएका थिए कि २० बर्ष अघि उसले बप्तिस्मा लिएको मुख्य कारण यो हो कि उनी पवित्र आत्माको शक्ति पाउन चाहन्थे ताकि उनी आफ्ना सबै पापहरुमाथि विजय पाउन सकून्। उसको अभिप्राय राम्रो थियो, तर उसको बुझाइमा केही त्रुटि थियो (निस्सन्देह, कसैसँग पूर्ण समझ छैन, हामी हाम्रा गलतफहमीको बाबजुद पनि हामीहरू परमेश्वरको अनुग्रहले मुक्ति पाउँछौं)।
पवित्र आत्मा त्यस्तो कुरा होइन जुन हामीले "विजय" गर्न हाम्रो "विजय लक्ष्य" लाई प्राप्त गर्न सक्छौं, हाम्रो इच्छाशक्तिको लागि एक प्रकारको सुपरचार्जर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीमा उहाँ हामीलाई प्रेम, निश्चितता र घनिष्ठ सम्बन्ध दिनुहुन्छ जुन पिताले हामीलाई ख्रीष्टमा सक्षम पार्नुहुन्छ। ख्रीष्टद्वारा, पिताले हामीलाई आफ्नै बच्चाहरू बनाउनुभयो र पवित्र आत्माले हामीलाई यो पहिचान गर्न आध्यात्मिक भावना दिनुहुन्छ (रोमी :8,16:११)। पवित्र आत्माले हामीलाई ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध प्रदान गर्दछ, तर यसले पाप गर्ने हाम्रो क्षमतालाई अस्वीकार गर्दैन। हामीसँग अझै पनि गलत चाहनाहरू, गलत मनसायहरू, गलत विचारहरू, गलत शब्दहरू र कार्यहरू हुनेछन्।
यदि हामी कुनै खास बानी छोड्न चाहन्छौं भने पनि हामी पाउँदछौं कि हामी अझ त्यसो गर्न असक्षम छौं। हामीलाई थाहा छ कि यस समस्याबाट हामी मुक्त हुनको लागि परमेश्वरको इच्छा हो, तर केही कारणहरूले हामी हामीमा पारेको प्रभावलाई हल्लाउन असमर्थ देखिन्छौं।
के हामी विश्वास गर्न सक्छौं कि पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा साँच्चै काम गरिरहेको छ - विशेष गरी जब यस्तो देखिन्छ कि वास्तवमै केहि पनि भइरहेको छैन किनकि हामी धेरै "असल" इसाईहरू होइनौं? यदि हामी पापसँग स keep्घर्ष गरिरहन्छौं, जब हामी वास्तवमै धेरै परिवर्तन हुँदैनौं जस्तो देखिन्छ, के हामी यस्तो निष्कर्षमा पुगेका छौं कि हामी यति विघ्नगत छौं कि भगवानले पनि समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन्?
शिशु र किशोर-किशोरीहरू
जब हामी विश्वासका साथ ख्रीष्टमा आउँछौं, हामी नयाँ गरी जन्मेका हुन्छौं, ख्रीष्टद्वारा फेरि सृष्टि हुन्छन्। हामी नयाँ प्राणीहरू, नयाँ मान्छेहरू, ख्रीष्टमा बच्चाहरू हौं। शिशुहरूको कुनै बल हुँदैन, उनीहरूसँग कुनै सीप हुँदैन, तिनीहरू आफैंले सफा गर्दैनन्।
जब उनीहरू हुर्कन्छन्, तिनीहरूले केही सीपहरू प्राप्त गर्छन् र महसुस गर्न थाल्छन् कि त्यहाँ उनीहरूले गर्न नसक्ने धेरै कुरा छन्, जसले कहिलेकाँही निराश पार्छ। तिनीहरू crayons र कैंची संग fiddle, चिन्तित कि तिनीहरू यो एक वयस्क रूपमा गर्न सक्छन्। तर निराशाको बाउन्डले सहयोग गर्दैन - केवल समय र अभ्यासले सहयोग गर्दछ।
यो हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा पनि लागू हुन्छ। कहिलेकाँही युवा मसीहीहरूलाई लागूपदार्थको दुर्व्यसन वा तातो रिसको साथ भाँच्न नाटकीय बल दिइन्छ। कहिलेकाँही इसाईहरू चर्चको लागि तुरून्त "खजाना" हुन्छन्। धेरै पटक पछि, यस्तो देखिन्छ कि इसाईहरूले पहिले जस्तै पापहरूसँग लडे, उनीहरूको व्यक्तित्व उस्तै उस्तै डर र निराशा थियो। तिनीहरू आत्मिक राक्षसहरू होइनन्।
हामीलाई भनिएको छ कि येशूले पापमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, तर यस्तो देखिन्छ कि पापले अझै हाम्रो शक्तिमा रहेको छ। हामी भित्रको पाप प्रकृति पराजित भएको छ, तर यसले हामीलाई अझै उसको व्यवहार गर्दछ जस्तो हामी उसको कैदी हो। हे हामी कस्ता दुखी मानिस हौं! कसले हामीलाई पाप र मृत्युबाट बचाउँछ? येशू पक्कै पनि (रोमी .7,24.२25-२XNUMX) उसले पहिले नै जितेको छ - र उसले यस विजयलाई हाम्रो विजय बनायो।
तर हामी अझै पूर्ण विजय देख्दैनौं। हामी अहिलेसम्म मृत्युमाथि उसको शक्ति देख्दैनौं, न त हाम्रो जीवनमा पापको अन्त्य भएको नै छ। हिब्रू २: says ले भन्छ, हामी अझै सबै चीजहरू हाम्रो खुट्टामुनि देख्दैनौं। हामी के गर्छौं - हामी येशूमा विश्वास गर्छौं। हामी उसको कुरामा विश्वास गर्छौं कि उसले जितेको छ र हामी उसमा विश्वास गर्छौं कि हामी उहाँमा पनि विजयी छौं।
हामी जान्दछौं कि हामी ख्रीष्टमा स्वच्छ र शुद्ध छौं, हामी हाम्रा व्यक्तिगत पापहरूमाथि विजय हासिल गर्न प्रगति देख्न चाहन्छौं। यो प्रक्रिया कहिलेकाँही एकदम सुस्त देखिन्छ, तर हामी उहाँमा र अरूमा पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएबमोजिम गर्न सक्नेछौं। आखिर, यो हाम्रो काम होइन। यो हाम्रो होइन, उसको एजेन्डा हो। यदि हामी ईश्वरको अधीनमा बस्छौं भने हामी उहाँकै लागि कुर्नुपर्दछ। उहाँ हामीमा काम गर्न उहाँमाथि भरोसा गर्न तयार हुनुपर्दछ जुन उहाँ हामीमा सही र ठीक छ भनेर सोच्नुहुन्छ।
किशोर-किशोरीहरू अक्सर सोच्दछन् कि उनीहरू आफ्ना बुबाहरूलाई भन्दा बढी जान्दछन्। तिनीहरू सोच्दछन् कि उनीहरूलाई के जीवनको बारेमा थाहा छ र तिनीहरू आफैले राम्रो गर्न सक्दछन् (निस्सन्देह, सबै किशोर किशोरीहरू यस्ता हुँदैनन्, तर स्टेरियोटाइप केहि प्रमाणमा आधारित छ)।
हामी इसाईहरू कहिलेकाँही वयस्कहरू जस्तै हुने किसिमले सोच्न सक्छौं। हामी सोच्न सक्छौं कि आध्यात्मिक "हुर्किनु" सही व्यवहारमा आधारित छ, जसले हामीलाई यो सोच्न लगाउँदछ कि परमेश्वरसामु हाम्रो स्थिति हामी कसरी राम्रो व्यवहार गर्छौं त्यसमा निर्भर गर्दछ। यदि हामी राम्रो तरिकाले व्यवहार गर्छौं भने हामी अरूलाई तुच्छ ठान्ने प्रवृत्ति देखाउन सक्छौं जुन हामी जस्तो राम्रो छैन हामीप्रति पनि छ। यदि हामीले त्यस्तो राम्रो व्यवहार गरेनौं भने हामी निराश र निराशमा पर्न सक्छौं र विश्वास गर्न सक्छौं कि परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नुभयो।
तर परमेश्वर हामीसामु उहाँ अघि धर्मी बन्न चाहनुहुन्न; उहाँ हामीलाई उहाँमाथि भरोसा गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ, उहाँ जो एक अभक्तलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ (रोमी::)) जसले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीलाई ख्रीष्टको खातिर बचाउनुहुन्छ।
जब हामी ख्रीष्टमा परिपक्व हुन्छौं, हामी परमेश्वरको प्रेममा अझ दृढतापूर्वक विश्राम गर्छौं, जुन हाम्रो लागि ख्रीष्टमा उच्चतम तरिकामा देखाइन्छ (१ यूहन्ना :1:१:4,9)। जब हामी यसमा आराम गर्छौं, हामी प्रकाश २१: in मा वर्णन गरिएको दिनको प्रतिक्षा गर्दछौं: «र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ, र मृत्यु हुनेछैन, न त कष्ट, चिच्याइ वा पीडा नै हुनेछ। ; किनकि पहिलो बितिसक्यो।
जब त्यो दिन आउँछ, पावल, हामी तुरुन्तै परिवर्तन हुनेछौं। हामीलाई अमर, अविनाशी, अपरिहार्य बनाइनेछ (१ कोरि। १.1..15,52२- .53) बाहिरी मानिसलाई मात्र होइन, भित्री मानिसलाई पनि परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्छ। यसले हाम्रो भित्री परिवर्तन गर्दछ, कमजोरी र अशक्ततादेखि महिमासम्म र खासमा, पापहीनतामा। अन्तिम तुरहीको आवाज संग, हामी कुनै समय मा परिवर्तन हुनेछ। हाम्रो शरीर रिडिम गरियो (रोमी :8,23:२), तर अझ, अन्तमा हामी आफैलाई हेर्नेछौं कि परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टमा कसरी बनाउनुभयो (१ यूहन्ना :1:१:3,2)। त्यसपछि हामी स्पष्टसँग देख्न सक्दछौं कि अदृश्य वास्तविकतालाई परमेश्वरले ख्रिष्टमा वास्तविक बनाउनु भएको थियो।
हाम्रो पुरानो पाप प्रकृतिलाई ख्रीष्टले पराजित गर्नुभयो र नष्ट गर्नुभयो। वास्तवमा, ऊ मरिसकेकी छ। "पावल भन्छन्," किनकि तपाई मर्नुभयो, र तपाईको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँगै लुकेको छ। " (कल। १.२०) हामी "सजीलो गरीएको" र हामी "बहाउन को लागी" कि पाप (हिब्रू १२: १) हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार ख्रीष्टमा नयाँ मानिसको भाग होइनौं। हामीले ख्रीष्टमा नयाँ जीवन पाएका छौं। जब ख्रीष्ट आउनुहुनेछ, तब अन्तमा हामी आफूलाई पिताले हामीलाई ख्रीष्टमा बनाएको जस्तो देख्नेछौं। हामी आफूलाई हामी वास्तवमा जस्तो देख्नेछौं, ख्रीष्टमा त्यति उत्तम छ, जो हाम्रो वास्तविक जीवन हुनुहुन्छ (कलस्सी १: २ 3,3-२4) यस कारणले गर्दा, किनकि हामी पहिले नै मर्िसकेका छौं र ख्रीष्टसित बिउँतिएका छौं, त्यसैले हामी "मार्छौं" (पद)) हामीमा पृथ्वीमा के छ।
हामीले केवल शैतान र पाप र मृत्युलाई पराजित गर्छौं - थुमाको रगतबाट (प्रकाश :12,11:१)। क्रुसमा जीतेका येशू ख्रीष्टको विजयद्वारा हामीले पाप र मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्दछौं, पापको बिरूद्धको संघर्षबाट होइन। पापको बिरूद्धको हाम्रो स्घर्ष यस तथ्यको अभिव्यक्ति हो कि हामी ख्रीष्टमा छौं, हामी अब परमेश्वरका शत्रुहरू होइनौं, तर उहाँका मित्रहरू, उहाँसँगको सम्बन्धमा पवित्र आत्माको माध्यमबाट, जो हामी दुबैमा काम गर्दछ, इच्छा र पूर्ति परमेश्वरको इच्छा अनुसार (फिलिप्पी २)
हाम्रो पापको विरुद्धमा संघर्ष गर्नु भनेको ख्रीष्टमा हाम्रो धार्मिकताको कारण होइन। उसले पवित्रता ल्याउँदैन। ख्रिष्टमा हामीप्रति परमेश्‍वरको प्रेम र दया नै धार्मिकताका निम्ति एकमात्र कारण हो। हामी धर्मी छौं, परमेश्वरले ख्रीष्टद्वारा सबै पापहरू र सबै निष्खोटहरूबाट छुटकारा पाउनुभयो किनकि परमेश्वर प्रेम र अनुग्रहले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ - र कुनै अन्य कारण बिना। पापको बिरूद्धको हाम्रो संघर्ष केवल नयाँ र केवल अहंकारको फल हो जुन ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभयो, यसको कारण होइन। हामी पापी छँदा ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो (रोमी :5,8:११)।
हामी पापलाई घृणा गर्दछौं, हामी पापसँग लड्छौं, हामी दुखाइ र दु: खबाट बच्न चाहन्छौं जुन पापले हाम्रा लागि र अरूलाई ल्याउँछ किनभने परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टमा जीवित तुल्याउनुभएको छ र पवित्र आत्माले हामीमा काम गर्नुहुन्छ। किनकि हामी ख्रीष्टमा छौं, हामी पापको बिरूद्ध लड्छौं जुन "हामीलाई सजिलैसँग बुनियो" (हिब्रू २.12,1) तर हामी हाम्रा आफ्नै प्रयासहरू मार्फत विजय हासिल गर्दैनौं, हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट पनि पवित्र आत्माले शक्ति प्राप्त गर्दैनौं। हामी ख्रीष्टको रगतद्वारा विजय प्राप्त गर्दछौं, उहाँको मृत्यु र बौरिउठाइको कारणले, हामीहरूकालागि शरीरमा परमेश्वरको अवतार पुत्र हुनुहुन्छ।
हाम्रो मुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा परमेश्वरले ख्रीष्टमा पहिल्यै गरिसक्नुभएको छ र हामीलाई उहाँमा ख्रीष्टमा चिन्न बोलाएर जीवन र धार्मिकताको लागि हामीलाई चाहिने सबै कुरा उहाँ हामीलाई दिइसक्नुभएको छ। उसले भर्खरै यो गर्यो किनभने ऊ एकदम अतुलनीय छ (२ पत्रुस १, २-))
प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई बताउँछ कि त्यहाँ त्यस्तो समय आउनेछ जब त्यहाँ चिच्याउने, आँसु, कष्ट र पीडा हुनेछैन - र यसको मतलब त्यहाँ कुनै पाप हुनेछैन किनकि यो पाप हो, दु: ख हो कारण। अचानक एउटा छोटो क्षणमा, अन्धकार अन्त्य हुनेछ र पापले हामीलाई सोच्न सक्षम बनाउन सक्दैन कि हामी अझै पनि उसको कैदी हौं। हाम्रो साँचो स्वतन्त्रता, ख्रीष्टमा हाम्रो नयाँ जीवन, उहाँसँग सदाका लागि आफ्नो महिमामा चम्किनेछ। यस बीचमा, हामी यसको वाचाको शब्दलाई विश्वास गर्छौं - र यो त्यस्तो चीज हो जुन बारे सोच्न लायक छ।